Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) စမ်းသပ်မှု Androidsis
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) စမ်းသပ်မှု
el_iulius | | reviews, Samsung
တစ်ဦးပြီးနောက် အပိုင်း terminal ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရည်စူးပြီးကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယအနေဖြင့်အကြောင်းကိုပြောပါမည် software အပိုင်း။ အရာအားလုံး အစီအစဉ်များ နှင့် အပြန်အလှန်ပြုမူမှု ဒီပစ္စည်းက Android ကိုသယ်ဆောင်ရခြင်းရဲ့အားသာချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတာပါ။
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာကနေစတင်ပါ operating system ဗားရှင်း သူဆောင်ခဲ့သောအရာကို။ ကုမ္ပဏီများ အန်းဒရွိုက် 2.2.2နှင့်အတူ, နောက်ဆုံးပေါ် Froyo ဗားရှင်းကနေ kernel ကို 2.6.32.9 ။ De Gingerbread နှင့်ပတ်သတ်သည့်သတင်းများ Samsung က Ginger ကိုမိမိကိုယ်တိုင်တင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာမျှမတွေ့ပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များသည့်ကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သငျသညျ device ကို root နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘာမျှမ။ CyanogenMod version အချို့ကို Galaxy S (ဖုန်း) မှအရှေ့ Galaxy S (MP4) သို့ယူဆောင်လာခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတွင်မည်သူမျှလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။
ရန်အဖြစ် ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင် အဆိုပါဖြစ်ပါသည် မင်္ဂလာပါ Galaxy S နှင့်၎င်းကိုယူဆောင်လာသည့် Samsung ၏ funciona muy Bien ။ ကာတွန်းကားများနှင့်အချို့ဝစ်ဂျက်များကိုထည့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရှိသည် လူမှုကွန်ယက်များနှင့်ပေါင်းစည်းမှု သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ်တွစ်တာအဆက်အသွယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်များထဲသို့ထည့်ပေါင်းရန်။ ဖြစ်နိုင်တယ် ၎င်းမှကမ်းလှမ်းသောဝစ်ဂျက်များကိုအနည်းငယ်တိုတောင်းသည်။ ဥပမာ LG သို့မဟုတ် HTCSense တို့လိုမျိုးစားပွဲခုံများမရှိ။ သို့သော် Android စျေးကွက်တွင်နာရီများရှိသည့် Widgets များ၏ခန့်မှန်းခြေနံပါတ် 823498235 ကိုရှာရန်ပြproblemနာမရှိပါ။
ကုမ္ပဏီများ ကိုယ်ပိုင် application များ များအတွက်စနစ်၏ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်ဂူဂဲလ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာ app နှင့်အတူ gapps အပြင် Gtalk ... ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော application တစ်ခုရှိသည် တာဝန်များကိုစီမံခန့်ခွဲ နောက်ခံတွင်မသိရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံထားရသော application တစ်ခုကိုပိတ်ပစ်ရန်။ ဖိုလ်ဒါ browser ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကို internal memory သို့မဟုတ် microSD တွင်ကြည့်ရှုရန်။ ဒါဟာအစရှိပါတယ် ရုံးခန်း နှင့် ဒိုင်ယာရီ ငါတို့အမှုအရာတို့ကိုရေးချရန်။ ဒါဟာအစဆောင်တတ်၏ Qik ဗီဒီယို ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွက် (ယင်း၏ Qik လက်စွဲဖြင့်) ရှေ့ကင်မရာကိုသုံးနိုင်သည်။
El မီဒီယာဖွင့်စက် သူတော်ကောင်းတရား Multimedia content များကိုကစားရန်အတွက်ဒီ terminal သည်အသံအရည်အသွေးကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာယုတ္တိရှိပါတယ်။ အပြင်ကစားသမားကိုယ်တိုင်က equalizerအချို့ထောက်ပံ့ပေး အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်နှစ်သက်သောရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်သင်နှစ်သက်သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနှစ်သက်သည့်အရည်အသွေးနှင့်အတူခံစားနိုင်အောင်စိတ် ၀ င်စားစရာထက်ပိုသည်။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာရွေးစရာကတော့ 'Allshare ' Samsung မှ ၎င်းကိုမသိသောသူများအတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုမည့် Samsung ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည် မီဒီယာဖိုင်များကိုမျှဝေပါ ငါတို့ကအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေမှာရှိတယ် \_ t သင်၏အိမ် Wi-Fi ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြင့်ပေါင်းခြင်း, ကြိုးမပါဘဲနှင့်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ Galaxy S Wifi တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဂီတကို PC application မှတဆင့်ဂီတကို၎င်း၏ hard drive သို့လွှဲပြောင်းစရာမလိုဘဲကြိုးများနှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုပဲနားထောင်နေသည်။ တေးသီချင်းကိုဖုန်းကိုယ်နှိုက်မှထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ သီချင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်၌မည်သည့်အရာကိုဖွင့်မည်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်စက်ပစ္စည်းများအကြားကွန်ယက်ဖိုလ်ဒါများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်မည်သည့်ချိန်ညှိချက်များကိုမျှပြင်ဆင်စရာမလိုပါ။
ဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ရှေ့မှာaရှိတယ် Android ကိရိယာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးထဲ ၀ င ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းတွင်အသုံးပြုသော application အားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတယ် အခြား android လို terminal ပဲ၊ ဒီကမ်းလှမ်းသောအားသာချက်များနှင့်အတူ တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာကိုလစဉ်ပေးစရာမလိုပဲ သင့်အနေဖြင့် microSIM အတွက် slot တစ်ခုလွတ်သွားပြီးအိမ်အပြင်ဘက်တွင် 3G ရှိနိုင်လျှင်၊ Wi-Fi မှာအမြဲတမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက terminal ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးစေပြီး ၀ ယ်သူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုဆွဲဆောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြောပါ 2500mAh ဘက်ထရီ။ လိုက်နာတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၅ လက်မဖန်သားပြင်ရှိသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာသင်လိုချင်သမျှကိုကြည့်နိုင်သည်။ တေးဂီတများစွာကိုနားထောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နာရီ ၆ မိနစ်အကြာတွင် Samsung ကကြေငြာသောဗီဒီယိုကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းများကစားပါကဘက်ထရီကိုစားရန်အတွက်အချိန်ကောင်းကောင်းကစားရမည်။
အခုချိန်ထိ software အကြောင်းပြောနေတဲ့ဒုတိယအပိုင်း။ အဲဒီမှာရှိလိမ့်မည် တတိယအပိုင်း Terminal ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးပြီးဂရပ်ဖစ်စွမ်းအင်လိုအပ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုစမ်းသပ်မှာပါ။ terminal ကကျွန်တော်တို့ကိုစွမ်းအားပေးနိုင်မလား၊ 1GHz ပရိုဆက်ဆာနဲ့ core တစ်ခုနဲ့သာ 'ရေတွက်' ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) စမ်းသပ်မှု
ကိုယ့် Samsung ကိုကိုးကွယ်ပါတယ် ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးတတိယမြောက်အပိုင်းကိုယူပါ။ ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ အရမ်းလှတယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ DILEMA ဒါမှမဟုတ် iPod Touch ဝယ်ဖို့ငါတွန့်ဆုတ်တယ်။
ငါ Samsung ကို adore မှစာပြန်ရန်
ငါပြီးသားနီးပါးအဆင်သင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှာတင်ရန်ဗီဒီယို ၂ ခုရှိသည်။
ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ဤ samsung galaxy s မော်ဒယ် yp-g70 မော်ဒယ်သည်တက်ဘလက်ကစားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ?????
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်တွင် galaxi S yp-G70 SN ရှိရမည်။ ပုံများကို pc သို့မည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်သည်
Fabian Del Pino နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ကျွန်တော် Galaxy S wifi 5.0 ဒါမှမဟုတ် player ကို ၀ ယ်လိုက်တာပဲ။ ဒီဖုန်းကို Android 3.1 HONEYCOMB (သို့) 4.0 ICECREAM SANDWICH သို့မွမ်းမံနိုင်သလား။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းက။
Fabian Del Pino အားပြန်ပြောပါ
၂.၃ ထက်မြင့်သောတရားဝင်မူကွဲများမရှိပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် Samsung က ၄ င်းကို 2.3 ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်စေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်။ (အကယ်၍ xperia type ကိုသုံးပါကဤမီဒီယာဖွင့်စက်ကိုမသုံးပါနှင့်!)
Tablet yp g70 မှ pin ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy gp g70 tablet ပါ။ ပြီးတော့၎င်းကိုဖုန်းတစ်လုံးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်နည်းလမ်းရှိကြောင်းသိချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့လျှင်, ဘယ်လိုပြုသလဲ?
juan carlos သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ galaxy s yp-g70 ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဆဲလ်ဖုန်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်နည်းလမ်းရှိလားသိချင်တယ်။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု - whatssapp ကိုဒီတက်ဘလက်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသလား ဘယ်မှာကူးယူလို့ရမလဲ ဘာ? ကျေးဇူးပြု၍ ee ပေးပါ
အလွန်ဆိုIbañez Becerra ဟုသူကပြောသည်
ယနေ့ကျွန်ုပ် Samsung samala s galaxi s wifi 5.0 ကိုဖွင့်လျှင်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးပြိုပျက်သွားခြင်းမရှိသကဲ့သို့၎င်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
Alonso Ibañez Becerra ကိုပြန်သွားပါ
ဒီနဂါးငွေ့တန်း yp g70 ကိုဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ။ အာဂျင်တီးနားမှာနေထိုင်တဲ့ဒီထုတ်ကုန်ကိုဘယ်လိုကြိုက်နှစ်သက်နိုင်လဲ။
HTC ChaChaCha (II) ကိုစစ်ဆေးခြင်း
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 စမ်းသပ်မှု (၁)